Markuu Ogaadey in ay Jaceyl daran u qabto ayuu isku dayay inuu… - Hablaha Media Network
Markuu Ogaadey in ay Jaceyl daran u qabto ayuu isku dayay inuu…
HMN:- Jariirada weyn ee Daily Mail ee laga leeyahay Ingiriiska ayaa qortay gabar lagu magacaabo Teresa Aydinar oo da,deedu tahay 44 sano taasoo maalin kasta cunto 1kgrm oo dhagxaan ah markii ay rabto inay soo celiso xalisoonida nafta.
Teresa ayaa oo ka cabaneyso cudurka Pekka oo ay yar tahay in la helo qof qabo, wuuxuna cudurkaas kugu qasbayaa inaad cunto dhagxaanta iyo cararada.
Gabadhaan ayaa ilaa markii ay nooleed waxay cuntay ku dhawaad 14 Tan oo dhagxaan ah.
Mar ay ka hadashay sababta keentay inay cunto dhagxaanta waxay ku sheegtay inay ku qalbi qabawsato ” Markii aan dareemi xasilooni la,aanta nafta ama aan walwal dareemo waxaan cunaa xoogaa dhagxaan ah markaas kadibna waxaan dareemaa qalbi qabawsi, waana jeclahay cunista dhagxaanta, mararka qaarna waxaan isku darsadaa dhagxaan iyo dhoobo.
Teresa ayaa sidoo kale sheegtay inay meel qaas ah dhagxaant ka doonato weliba ay doorbido kuwa jilicsan si ay iigu fududaato cunista.
Ma Jirto ilaa hadda dhibaato ay ka dhaxashay cunista dhagxaanta marka laga reebo gariir ka dareento caloosha dhexdeeda, waxay sheegtay inay isku dayday joojinta ficilkaan xun iyadoo kaashaneyso wiil ay is jeclaayeen, balse uma suurta gelin ilaa iyo hadda joojinta cunista dhagxaanta maalinba maalinta ka dambeysana sheekada way sii macaataa.